Wasaaradda Xanaanada Xoolaha oo Muqdisho ku qabatay kulan looga hadlayay ilaalinta deegaanka – Radio Muqdisho
Kulankan wada tashiga ah oo ay maanta ku wada yeesheen magaalada Muqdisho Wasiir ku xigeenka Wasaaradda Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa C/naasir Gaarane Maxamuud iyo ururada, Ganacsatada iyo qaar kamid ah hay’adaha ka shaqeeya horumarinta Xanaanada Xoolaha iyo ilaalinta deegaanka ayaa waxaa uu u jeedkiisu ahaa u diyaar garowga maalinta dhir beerista Soomaaliya oo ku beegan 17 Abriil ee soo socota.
Kulanka ayaa intii uu socday waxaa dhinacyadii ka qeybgalay isku dhaafsadeen afaaro ku aadan horumarinta dhirta ilaalinta deegaanka waxaana ganacsatadii kulanka la yeelatay Wasiirka ku xigeenka ay balan qaadeen in ay ku dadaalayaan sidii si wadajir ah loogu qeyb qaaadan lahaa maalinta Dhir beerista Soomaaliya.
Nuurto Sheekh Maxamuud oo madax ka ah urur ka shaqeeya horumarinta Xanaanada Xoolaha ayaa sheegtay kulankan uu ahaa mid muhiim ah isla markaana ay qaadan doonaan doorkooda ku aadan arintaasi.
Wasiir ku xigeenka Xanaanada Xoolaha, Dhirta iyo Daaqa C/naasir Gaarane Maxamuud ayaa ka qeybgaliyaash ugu mahadceliyay isagoo sheegay dadka Soomaaliyeed looga baahan yahay in ay ka faa’ideystaan Xoolaha isla markaana ilaaliyaan caafimaadkooda.
Sidoo kale Wasiir ku xigeenka ayaa tilmaamay in Wasaaradda ay qorsheysay todobaadka Dhir beerista oo ka bilaabanaysa 11 Abriil ilaa 17 isla bishaasi.
“Dowladnimada ayaa waxaa ay ku dhisan tahay kheyraadka uu dalka leeyahay ma jirto dalka ku dhisan deeq la siiyay” waxaa sidaasi yiri Wasiir ku xigeenka Xanaanada Xoolaha C/naasir Gaarane.